त्यो प्रभात छिट्टै आओस्
Posted by Nirajan Thapa April 10, 2013
एक जना भन्छ – “देश बर्बाद भो !”
त्यसैमा अर्कोले थप्छ – “नेताहरुले देशलाई खत्तम बनाए !”
सबभन्दा निराश अर्कोले सुस्केरा हाल्दै बोल्छ – “नेपालमा बसेर केहि हुँदैन, भविष्य बनाउन विदेश नगई हुँदैन ।”
स्वदेशमा हुँदा म स्वयं संलग्न भएका वार्तालापहरुमा मैले सुन्ने गरेका गुनासाहरु हुन् यी । म आफैले बोल्ने गरेका वाक्यांशहरु पनि यिनै हुन । र, प्रायः सबैतिर सबैजसोले सधैंभरी संवादमा समाहित गरेका तिक्तताहरु समेत हुन् यी । म जान्दिनँ भनिएका सबै यथार्थ हुन या होईनन् तर मैले बुझेको यत्ति हो – देश अत्यन्तै गम्भिर परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालीन अवस्था अझ लम्बिदो छ । हुन्छ भनिएका कुराहरु भैरहेका छैनन् । आम मानिसहरु हतार अनि निराश मनस्थितीमा छन् । देशको बागडोर संचालनको जिम्मा पाएका तथाकथितहरु ‘कुहिरोको काग’ भएका छन् । सहमतिको रटान दिदै उनीहरुले आ–आफ्नै डम्फु बजाईरहेका छन् । कर्तव्य बोध गरेर जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमता हामी सबैमा करिबकरिव समाप्त भैसकेको डरलाग्दो परिस्थितीको निर्माण भैसकेको छ । अझ गम्भिर विषय त सधैं बुढो पुस्तालाई केहि गर्न दिएनन् भनी आरोप लगाउँदै आएका युवापुस्ता भनौंदाहरुको प्रतिनिधि कोहिपनि अग्रगामी कदम चाल्न तत्पर छैन । यो पुस्ता बुढा पुस्ताहरुले भने जस्तै काँचो र अपरिपक्व हुनमा नै रमाएको छ । त्यसैमा मज्जा लुटेको छ ।
अनि अर्कोतिर आफूलाई सदा सोझो र निम्छरो ठान्ने हामी जनताहरु चाँहि देशको विग्रदो परिस्थितीको हिस्सेदार आफू पनि हो भन्ने तथ्यलाई हृदयगंम गर्नबाट भागिरहेका छौं । खाली दोष लगाउनु र सराप्नु बाहेक खास ठोस पहलकदमी हामीले लिन नै खोजिरहेका छैनौं । फगत चिया पसलमा “देश बर्बाद भयो” भन्ने गुनासाहरु गर्दैमा हाम्रा प्रभातहरु बित्ने गरेका छन्, र भट्टिहरुमा “नेपालमा बसेर भविष्य नबन्ने” गफ चुट्दैमा हाम्रा साँझहरु खेर गैरहेकै छन् । हामीलाई लागिरहेको छ – गफ गर्नु, गुनासो गर्नु अनि खुइय सुस्केरा हाल्नु जनताका हैसियतमा हामीलाई स्वतः प्राप्त अधिकार हुन यी । बेफ्वाँकका गफगाफमा जुट्नुको अलावा देश निर्माणका खातिर हाम्रा पनि केहि महत्वपूर्ण दायित्वहरु छन् भन्ने “हरिज्ञान” हामीलाई कहिल्यै आउन सकेको छैन । बरु सकभर जसरी हुन्छ, नेताहरुलाई गाली गर्नु र त्यसैबाट प्राप्त भ्रामक आत्मसन्तुष्टिमा रमाउन सक्नु मै खुशि लागिरहेछ हामीलाई । बिचरा हामीहरु !
बिर्सिनै नहुने कुरो के हो भने संविधान निर्माणका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधिहरु पठाउने हामीहरु नै हौं । उनीहरु अर्थात हाम्रा प्रतिनिधीहरुले संविधान बनाउन असफल भए भन्नुको मतलब हामी पनि धेरथोर यस मामिलामा असफल नै भयौं । अब एकपटक हुनै नहुने एउटा गम्भिर त्रुटी भएको छ । त्यो त्रुटि जिम्मेवारी पाएर पनि पूरा गर्न असफल हाम्रा नेताहरुले गरे, अनि चुपचाप रहेर त्यसको अनुमोदन हामीहरुले गर्‍यौं । यसको सिधा अर्थ संविधानसभाको अवसानमा केहि भूमिका हाम्रो पनि छ । त्यसरी भैसकेको त्रुटिलाई समयमै हामीहरुले महशुस गर्नु जरुरी छ । ईन्कार र निषेधले कहिल्यै पनि कसैको भलो हुँदैन । अब हामी सबै एकै स्थानमा उभिनु जरुरी छ । जतिसक्दो छिटो ताजा जनमतमा गएर नेपाली भूगोल सुहाउँदो संविधान निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
अब हामीले त्यो आगत निर्माण गर्नुछ जहाँ सम्पूर्ण नेपालीहरु पूर्ण आत्मसम्मानका साथ नेपाली भएर बाँच्न सकुन । हाम्रा हिमालजस्तै खुलेर सबै नेपालीले हाँस्न सकुँन । र, आफ्नो भविष्य आफ्नै मातृभूमिमा देख्न सकुन । सकौं । जय नेपाल !
lekh pade.....tara santushta xaina ma chai.....kina kina tesai chitta bujena.....garna nakhojhne manxe xan pakkai pani...tara garne haru ni xan...garda garda jiban sakyeka ni xan..tara kehi laxarpato lagena yehi chai dukha lago kura ho
दिलमायाको दिलमा शिरीष फूलेको दिन
यून्ती, प्राध्यापिका र देश दुखेको छाती
फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ ?